नयाँ दैनिक | समाजवादको वहस थाल्ने को हुन् यी नेता ? समाजवादको वहस थाल्ने को हुन् यी नेता ? – नयाँ दैनिक
‘संसारभर समाजवादको एउटै मोडेल हुन्छ ? या अनेकन मोडेलहरु छन् ?’
पुस १३, काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेको छ यतिबेला । बहुमत मात्रै होइन, दुईतिहाई बहुमत छ यो सरकारसँग । ठूला दुई कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी पार्टी नै एकता गरी केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संयुक्त नेतृत्व गरेका छन् । सरकारको नेतृत्वमा छन्, दुई मध्येका एक अध्यक्ष–ओली । यही सरकारको नारा छ–सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल !
मुलक समाजवाद उन्मुख हुने भनेको छ नेपालको संविधानले । तर, समाजवादमा कसरी पुग्ने र समाजवाद कस्तो हुने ? बारे भने कुनै वहस छैन । वैचारिक वहस गर्ने र नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्ने संकेत पनि देखिँदैन । तर, पार्टीभित्र विचारको वहस हुन छाडेकोमा चिन्ता गर्ने र वहस जरुरी ठान्ने नेता नभएका भने होइनन् । नेकपाको स्थायी समितिमा घनश्याम भुषालले वहस छेडिरहेका छन् भने केन्द्रीय समितिमा पनि लेखनाथ न्यौपाने लगायतका नेताहरु छन् वैचारिक वहसमा ।
पछिल्लो समय नेकपाका केन्द्रीय सदस्य रामदीप आचार्यले समाजवादको वहस थालेका छन् । ४० वर्षीय युवा नेता आचार्यले समाजवादी अध्ययन प्रतिष्ठान सुरुवात गरेर युट्युबमार्फत वहसको आह्वान गरेका छन् ।
जनयुद्धको आधारभूमि जाजरकोटमा जन्मिएका आचार्य अखिल (क्रान्तिकारी)का पूर्व उपाध्यक्ष हुन् । तार्किक र प्रखर वक्ता आचार्य सहिद परिवार पनि हुन् । उनका दाजु इन्द्रलाल आचार्य र दिदी ममिता आचार्य जनयुद्धमा सहिद बनेका थिए । अर्का दाजु नेकपाको कर्णाली प्रदेशका सचिव हुन् ।
राजनीतिक परिवारका आचार्य प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा जनसम्पर्क सल्लाहकार समेत रहेका थिए । उनकी श्रीमति कृष्णा शाह पनि राजनीतिमै सक्रिय हुँदै कर्णाली प्रदेशको सांसद छिन् । सानैदेखि विद्याथी आन्दोलनमा सहभागी हुँदै जनयुद्धमा कुशल कमाण्डरका रुपमा काम गरेका आचार्य लेखन, अध्ययन र पार्टीकै काममा सक्रिय छन् । उनले चलाएको वहस कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
उनले युट्युवमा भनेका छन्, ‘नेपालको संविधानको मूल दिशा समाजवाद उन्मुख रहेको छ । झन्डै दुईतिहाई जनमत प्राप्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो अधिकतम कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद भएको प्रष्ट गरेको छ । नेकपा नेतृत्वको सरकारको प्रमुख दायित्व समाजवाद उन्मुख संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नु र समाजवाद निर्माणको बाटो फराकिलो बनाउनु हो ।’
बिगत बीसौँ सताव्दिमा समाजवादको प्रयोगको सन्दर्भमा भएका सकारात्मक र नकरात्मक, सफल र असफल अनुभवहरुको जगमा नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माण गर्न लागेको उनले जनाएका छन् । संसारभर समाजवादको एउटै मोडेल हुन्छ ? या अनेकन मोडेलहरु छन् ? समाजवाद स्वतः आफैँ स्थापित हुने राजनीतिक प्रणाली हो या हामीले योजनावद्ध रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ ? नेपाली मौलिकताका समाजवादका विशेषताहरु के हुन् ? यिनै प्रश्नहरुको केन्द्रमा रहेर समाजवाद अध्ययन प्रतिष्ठानले वैचारिक, राजनैतिक, दार्शनिक र आर्थिक सवालमा महान् वहसहरु सञ्चालन गर्न गैरहेको उनको भनाई छ ।
‘समाजवाद निर्माणको यो ऐतिहासिक अवसर र उत्तिकै जटिल चुनौतिको मोडमा नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माण गर्न सहभागी बनौँ !’ नेता आचार्यले सार्वजनिक रुपमा अपिल गरेका छन् । भूमण्डलीकृत पुँजीवाद नाशवान् भएको र समाजवाद विजय हुने आचार्यको विश्वास छ ।